Torohevitra hampandrosoana ny asanao amin'ny fampivoarana rindrambaiko - Victor Mochere
Torohevitra hampandrosoana ny asanao amin'ny fampivoarana rindrambaiko
Ny fampivoarana rindrambaiko dia sehatra be fitakiana be dia be ny mety ho fandrosoana amin'ny ho avy – saingy tsy midika izany fa azo antoka fa hahomby ianao noho ny nidiranao tamin'ity indostria ity. Raha ny marina, maro amin'ireo injeniera rindrankajy sy mpandrindra programa no miafara amin'ny fitotonganana rehefa afaka taona vitsivitsy monja satria tsy azony antoka ny fomba hampandrosoana ny asany. Miova sy mivoatra hatrany ny tontolon'ny fampiroboroboana rindrambaiko, izay miteraka asa sarotra sy mahafa-po. Mila mijanona eo ambonin'ny teknolojia sy fironana farany ny mpamorona rindrambaiko mba hahomby.
IT, amin'ny maha-indostria azy manontolo, dia tsy ao anatin'ny filaharana fohy no heverina ho tena mifaninana. Rehefa miha-mitombo hatrany ny IT isan-taona miaraka amin'ny fiankinan-doha tsy mitsaha-mitombo amin'ny toekarena manerantany sy ny fotodrafitrasa amin'ny serivisy, dia mitombo be ny fangatahana injeniera, teknisiana ary architects za-draharaha. Ny teboka eto dia ny hoe mila fomba iray hanavahana ny tenanao amin'ny vahoaka ianao. Ny maha-izy azy, ny maha-tokana ary ny fahaiza-manao hifaninanana sy hihoatra ny mitovy taona aminy dia fototra fototra tsara, saingy misy teknika sy nuance tokony hodinihina ihany koa.
Mba hanampiana anao hanararaotra ny asa fampandrosoana rindrambaiko, ireto misy toro-hevitra manam-pahaizana momba ny fahombiazana.
1. Aoka ianao ho mavitrika sy hifanerasera amin'ny hafa
2. Mahaiza mampifanaraka
3. Aza kivy
4. Aza mitsahatra mianatra toro-hevitra
5. Tandremo ny zavatra zarainao
6. Aza avela hisy vato tsy hivadika
7. Mampiroborobo ny tenanao
8. Manaova vaovao amin'ny teknolojia farany
9. Manomboka bilaogy
Tsy maninona na mpamorona eo anoloana ianao na mpamorona aoriana, dia ilaina ny mijanona eo ambonin'ny fironana farany amin'ny fivoarana sy ny teknolojia vao misondrotra. Ohatra, mampiasa rindranasa na serivisy manampy anao hijanona eo alohan'ny vahoaka toa ny Twitter, Facebook, Google Alerts na Reddit mihitsy aza. Ankoatra izany, azonao ampiasaina 1337x hizara rakitra amin'ny mpiara-miasa aminao na hisintona rindranasa hianarana tetika vaovao.
Ataovy azo antoka fa mijanona ho vaovao amin'ny vaovao momba ny indostria ianao ary misoratra anarana amin'ny gazety mifandraika amin'ny asanao mba hahafahanao mazoto amin'ny dingana. Ampahany manan-danja amin'ny fijanonana eo amin'ny sehatra mifaninana ihany koa ny tambajotra, noho izany dia araraoty ny fahafahana amin'ny fampivoarana matihanina amin'ny fanatrehana fihaonambe sy fivoriana ampiantranoin'ireo vondrona mpampiasa eo an-toerana eo amin'ny fiaraha-monina misy anao. Amin'ny fanaovana ireo zavatra ireo, dia hanampy anao handroso izany rehefa maro ny hafa mijanona noho ny fahanginana.
Tena mora, toy ny andraikitry ny asa hafa rehetra, ny mahazo aina amin'ny zavatra ataonao satria, raha ny marina, ny fanazaran-tena dia tonga lafatra, sa tsy izany? Ny olana eto anefa dia raha mijanona ao amin'ny faritra mampionona azy ny tsirairay dia tsy hisy zava-baovao hitranga. Amin'ny maha-mpamorona anao dia tokony hisokatra foana amin'ny hevitra sy teknika vaovao izay afaka manampy anao hanao tsara kokoa ny asanao ianao. Ny fanaovana izany dia ahafahanao mialoha ny fiolahana.
Na firy na firy ianao no tao amin'ny indostria, dia misy zava-baovao hatrany. Midika izany fa mila manova ny sasany amin'ireo zavatra efa zatra na nianaranao taloha. Raha mahita olana eny an-dalana ianao dia aza kivy, mangataha fanampiana. Hisy foana ny olona vonona hanolo-tanana hanararaotra izany rehefa ilaina izany. Ankoatra izany, tsy misy maharatsy ny mianatra zava-baovao.
Amin'izao vanim-potoana izao, afaka mianatra na inona na inona ianao na aiza na aiza. Raha ny marina, be dia be ny loharanon-karena an-tserasera izay noforonina ho an'ny mpamorona fotsiny mba hanampiana azy ireo amin'ny asany. Raha toa ka misy zavatra tsy mety na tsy hazavaina araka ny tokony ho izy, dia aza matahotra ny hitady loharano vaovao alohan'ny hamoahana azy. Mba hanamafisana ny asanao amin'ny maha-mpamorona anao, dia zava-dehibe ny fitadiavam-baovao vaovao foana ka miezaha misokatra rehefa mijery ny toro-hevitra/toro-hevitra avy amin'ny hafa. Aza avela hiditra ao amin'ny sofina iray ary mivoaka amin'ny sofina ireo toro-hevitra ireo.
Inona no mety ho hevitra mahasoa izay mety hanimba ny lazanao raha zaraina amin'ny hafa amin'ny fomba diso? Ataovy azo antoka fa mizara torohevitra sy loharano amin'ny olona mety ianao. Tena ilaina ny mahafantatra hoe iza ny mpihaino kendrenao alohan'ny hametrahana na inona na inona amin'ny Internet, raha tsy izany dia mety hiteraka fiantraikany ratsy amin'ny asanao izany. Amin'ny maha-mpamorona anao dia tokony hifantoka amin'ny fiarovana ny kaody sy ny rakitrao araka izay azonao atao ianao. Koa ataovy azo antoka fa mampiasa serivisy na fampiharana tsy mampidi-doza ny angonao ianao.
Ny fomba tsara indrindra hanamafisana ny fahombiazanao amin'ny maha-mpamorona anao dia amin'ny alàlan'ny tsy fitsaharana na kivy, na dia sarotra aza ny fotoana. Miomàna mandrakariva amin'ny fahafahana vaovao satria afaka mandondona amin'ny fotoana rehetra izy ireo. Mandrosoa hatrany amin'ny fanamby rehetra eo amin'ny fiainana mba handrosoana mankany amin'ny fahombiazana ao anatin'ity indostria tsy mitsaha-miova ity. Raha mijanona amin'ny tanjonao ianao dia ho anao ny fahombiazana.
Ampiasao ny tambajotra sosialy toy ny Twitter sy LinkedIn mba hampiroboroboana ny talentanao sy ny fahaizanao mba hahitan'ny orinasa anao rehefa mitady talenta vaovao izy ireo. Mandefa toro-hevitra momba ny lohahevitra teknolojia mba hanehoana ny fahaizanao. Mandraisa anjara amin'ny tetikasa loharano misokatra mba ho hitan'ireo mpampiasa mety hahita ny maha-mety anao amin'ny kolontsain'ny fikambanana misy azy. Ataovy azo antoka fa ny lahatsoratra bilaogy ara-teknika rehetra dia manana rohy miverina mankany amin'ny tranokalanao na pejy marika manokana.
Ampahany manan-danja amin'ny fahombiazanao ny fahazoanao vaovao amin'ny teknolojia farany. Mijanòna eo an-tampon'ny indostria amin'ny alàlan'ny fanarahana bilaogy, fanatrehana fihaonambe ary fandraisana anjara amin'ny fihaonana eo an-toerana mba hahafahanao mifandray amin'ireo matihanina hafa ao amin'ny faritra misy anao. Safidy iray hafa dia ny fandraisana anjara amin'ny vondrom-piarahamonina mpamorona eo an-toerana amin'ny alàlan'ny famitana ireo fanamby momba ny kaody sy ny fanaovana lahateny amin'ny fihaonana. Ny fandraisanao anjara mavitrika amin'ny fiaraha-monina dia hanampy anao koa manangana marika manokana.
Fomba iray hafa ahafahana manaraka ny fironana indostrialy dia ny manomboka mibilaogy momba izay mahaliana anao indrindra amin'ny fampivoarana rindrambaiko. Ataovy azo antoka fa tsara fikarohana ny toro-hevitra rehetra ary manome ohatra mazava momba ny fomba azo ampiasana azy ireo amin'ny toe-javatra tena misy. Tokony ho mora amin'ny mpitsidika ihany koa ny hahatakatra hoe iza ianao amin'ny fampidirana rohy miverina amin'ny tranokalanao, kaonty GitHub na pejy Twitter. Amin'ny alàlan'ny fanombohana bilaogy, tsy hoe hanohy hianatra bebe kokoa momba ny teknolojia samihafa ianao, fa hianatra fahaiza-manao sarobidy maro toy ny fitantanana fotoana sy ny fampisondrotana ny tena, izay tena ilaina rehefa mitady asa na fisondrotana.
Ny maha-mpamorona rindrambaiko dia mitondra fanamby maro, saingy mahafa-po ihany koa. Na dia mahafinaritra aza ny mitsinkafona amin'ny lalan'ny asanao ary mandroso amin'ny tsy mendrika mihoatra noho ny fahaizanao manokana sy ny etika miasa, ny asa dia dingana mavitrika. Mila miasa amin'izany ianao, manomana izany, ary miezaka manatsara ny lafiny rehetra amin'ny tenanao mba hahitana ny fahombiazana tadiavinao. Ny fivoaran'ny asan'ny mpamorona rindrambaiko dia afaka mandeha amin'ny lalana maro samihafa, ary mirona hivelatra mandritra ny taona sy am-polony maro, fa tsy volana.
Ny faharetana sy ny ezaka dia mahafa-po, ary ho hitanao ny fitomboanao eo amin'ny lalan'ny asanao sy ny maha-olona anao. Manana fotoana betsaka hananganana ny fahaizanao ianao, hanitarana ny tambajotran'ny fifandraisanao, ary hiorina amin'ny toerana tianao. Raha mazoto miasa sy be fatra-paniry laza ianao dia fotoana kely fotsiny. Amin'ny fanohizana ny fianarana teknolojia vaovao, toro-hevitra ary fironana, dia ho afaka hanararaotra ny asa fampandrosoana rindrambaiko ianao.